U-Elijah Mccoy usungule i-othomathikhi yesitimela eyithobayo - AFRIKHEPRI
Bukela Lo us (2016)
Umbhali ubhala i-10
Ukwelashwa kwezobuciko kanye nokwenza kahle izifiso ezonakalisayo
UZirignon Grobli ohlelweni lomsakazo "isivakashi sosuku" izwi le-diaspora
Umzila Wokuqala we-4
Ukubhujiswa kokushayela kanye nokwelashwa kwe-psychart
Psycho-therapy kanye nemisebe yethemba
Inkosi kanye nesigqila
Psycho-therapy kanye nokulawulwa kwezinto ezesabekayo zempi
Indaba kaShaka Zulu (1786-1828) nokuzalwa kwabantu abangamaZulu
I-Afrika-ihlangene, ngaphezu kwephupho, ubufakazi
Massacre of skirmishers African on June 19 and 20, 1940 at the Lyon
The Colonization of Africa - Isifinyezo Kumephu (Ividiyo)
Iminyaka engama-50 yamaphutha we-geostrategic abaholi base-Afrika
Inkulumo kaHilele Sélassié ku-AU ku-1963 no-64
Inkulumo ka-Amilcar Cabral
Inkulumo kaMartin Luther King "Nginephupho"
Isimo: "U-Kofi ANANN ubhale phansi emlandweni njengomuntu olwela amalungelo abantu"
Izingcingo zakho ezindala zivuselelwa kanjani ngamabha wegolide
IGhana ukwakha isizinda samandla amakhulu welanga e-Afrika
I-Nigerian idala ama-Wecyclers, i-Collection Collection kanye neNkampani Yokusebenzisa Kabusha
Futhi i-Afrika nayo yayenza inguquko yayo eluhlaza?
U-Payeng, umuntu otshalile ihlathi yedwa
Ukuqanjwa okungu-10 okungaguqula imvelo
Pierre Rabhi - Ukukhathazeka okwenza ujabule
Indawo yowesifazane omnyama e-Afrika yasendulo
I-donga, ubuciko bempi obunobunono bamasosha amaSurma anesibindi avela e-Ethiopia
Imibhalo engcwele nemibhalo engcolile evela eGibhithe lasendulo
Imvelaphi yase-Afrika ye-tarot
IGibhithe lasendulo lalazi futhi lenza uFaroonic yoga Sema Tawy
Kuqala nini ukuvuselelwa kwe-Afrika?
Umlando wefilosofi yase-Afrika
Umqulu we-revolution kamite
UMarcus Garvey: Umphefumulo wePan-Africanism
Ukulingana kwezinhlanga zabantu, u-Anténor Firmin
Izimfundiso zeTierno Bokar
Ubani uPaul Panda Farnana?
U-Ivan Van Sertima wavuza ngokubhala kabusha umlando womuntu
e ABANTU ABAKHULU ABAKHULU NABASEBENZI
Usuke usabela "U-Elijah Mccoy wasungula i-lubricator othomathikhi ..." Imizuzwana embalwa edlule
Indodana yezigqila zaseMelika abalekele eCanada, uMcCoy wazalwa eyisakhamuzi samahhala esifundazweni sase-Ontario. Ngokushesha wakhombisa ukutholakala kumakhenikha, ngokwesibonelo ukuhlanganisa izingxenye zomshini abekade ezihlakazile phambilini. Abazali bakhe bamthumela eScotland lapho ayothola khona uqeqesho lobunjiniyela futhi ubuyela eMichigan eMelika ngemuva kokuqedwa kobugqila.
Njengoba engakwazi ukuthola umsebenzi ngokuya ngokuqeqeshwa kwakhe, wavuma ukuba isicishamlilo sokuthambisa enkampanini yezitimela. Ngaleso sikhathi, izitimela kwakumelwe zehlise ijubane kakhulu phakathi nohambo lwesisebenzi esihamba eduze ukuyothambisa izembe namasondo ezinsimbi. Lokhu kudle isikhathi, futhi kwabangela ukulimala nokufa kubasebenzi.
McCoy, ukuxazulula lezi zinkinga wasungula inkomishi yokuthambisa, uhlelo lokuthambisa oluzenzakalelayo oluhlala luthululela i-lubricant phakathi nohambo futhi luqede ukubambezeleka nokubeka engcupheni izimpilo zabasebenzi. Ukusungulwa kwakhe kwaphumelela ezweni lonke futhi ngaphandle kokulingiswa, izinkampani zezitimela zonke zafuna ukuba noMcCoy (McCoy wangempela), isiqinisekiso sekhwalithi.
UMcCoy wathuthukisa ukwakheka kwakhe impilo yakhe yonke futhi wayezosetshenziswa ezinjini ezinenjini, emikhunjini yamasosha, emishinini yokushayela, imishini yezimayini, amafekthri nezindawo zokwakha, kanye nezitimela ezinokubonga kakhulu okugcotshwe yi-lubricator yakhe I-graphite ayisungula ngonyaka we-1920. Waqala nokwakhela unkosikazi wakhe umkakhe owayekhala ngobunzima bokuthi enze lo msebenzi futhi wasungula umtshini wokubulala utshani.
UMcCoy washona ngo-1929, iminyaka eyisikhombisa ngemuva kwengozi yemoto eyayibone ukushona kukankosikazi wakhe uMary neyamshiya nemiphumela engemihle. Umhlaba uzuze ifa lika-Elijah McCoy lezinguquko elizenzile ezigxile kakhulu kwezobuchwepheshe kanti negama lakhe lihlale lihlotshaniswa nekhwalithi, i-Real McCoy.